‘हार्पिक’ हालेर अमिलो बनाइन्छ पानीपुरी, बेच्नेहरु भन्छन् “कागती र चुक हालेर बेच्दा घाटा हुन्छ” – Chakra Jwala
Posted in Health/wellness, Many More
सिन्धुपाल्चोकका स्कुलहरूमा पुग्दा विद्यार्थीले मीठो मानेर चटपटे खाइरहेको देखेँ । विभिन्न स्कुलमा पुगेर म र मेरा केही साथीले स्वास्थ्य र पौष्टिक भोजन खानुपर्छ भनेर बतायौँ । खाजा खाने बेला स्कुलमा चटपटे बेच्ने महिलाले मीठो गरेर चटपटे बनाइन्, त्यसमा अमिलो भनेर चिनीजस्तो वस्तु हालिन् । मैले भनेँ, ‘चटपटेमा अमिलोको सट्टामा किन गुलियो हाल्नुभयो ? ‘होइन, यो त अमिलो हो, यसलाई चिनी अमिलो भनिन्छ, कागतीको अमिलो हाल्दा त एकदम महँगो हुन्छ । यही सस्तो पनि, बच्चालाई मनपर्ने अमिलो पनि’ भन्दै पोको पार्दै ती दिदीले वरिपरि उभिएर बसेकालाई चटपटे दिइन् । मसँगै काममा हिँडेकी उमाले भनिन्, ‘यो चिनी अमिलो त मैले घरमा पूजाका भाँडा, तामाका भाँडा माझ्न प्रयोग गर्छु । यसमा रहेको अमिलोपनले भाँडाको फोहोर सट्टै जान्छ ।’
‘यसरी भाँडा सफा गर्ने चिनी अमिलो बालबालिकाको पेटमा गएपछि यसले कति खराब होला । वास्तवमा यो त भाँडा मस्काउने अमिलो साबुन नै खाएको हो ।’ मैले त्यसरी चिनी अमिलोजस्तो विषालु रसायन नेपाली बालबालिकाले खालान् भनेर मैले कल्पना नै गरेकी थिइनँ । यो घटनाले मलाई केही महिनाअघि दिल्ली जाँदाको समाचार याद दिलायो । चनाचटपटे बेच्ने एक मानिसले फोहोर पानी हालेर बेचेको खबर पाएपछि केही सरकारी मानिस आएर चटपटेमा प्रयोग गरिने पानी कति शुद्घ छ भनेर जाँचेर हेर्दा उनीहरू छक्क परे । चटपटेमा हालिने पानीमा त शौचालय सफा गर्न प्रयोग गर्ने हारपिकमा प्रयोग गरिने रसायन भेटियो ।
कर्मचारीले त्यस मानिसलाई पानीमा किन हारपिकको रसायन देखियो भन्दा उसले भनेको कुरा सुनेर कर्मचारी स्तब्ध भए । ‘म त हारपिक हालेर नै पानीपुरी अमिलो बनाउँछु । कागती पानी वा चुक अमिलो हालेर पानी पुरी बेच्न थालियो भने नोक्सान भइहाल्छ नि ।’ ती पसलेलाई मिसावट गरेको हुनाले ६ महिनाको जेल सजाय दिइयो । उनी अहिले जेलबाट निस्केर पक्कै पनि फेरि पानीपुरी र चटपटे बेच्दै होलान् ।
Click here to learn more from my another Blog
हामीले सिन्धुपाल्चोकका छात्रछात्रालाई सोध्यौँ, ‘तिमीहरु कति चटपटे र पानीपुरी खान्छौ ?’ सबैले ‘मीठो मानेर प्रायः खाजा नै त्यही खान्छौँ’ भने । अनि हामीले एउटा फोहोर कचौरा ल्याएर, त्यो चिनी अमिलो हालेर कचौरा सफा गर्‍याै‌ भन्यौँ, ‘अहिले तिमीहरूले के देख्यौ ? सबैले भने, ‘तपाईंले चिनीजस्तो वस्तुले भाँडा सफा गरेको देख्यौँ ।’
Previous Post The main threats to Nepal’s biodiversity
Next Post खेलमैदान निर्माणमा सहयोग गर्न चौतर्फी आग्रह
2 thoughts on “‘हार्पिक’ हालेर अमिलो बनाइन्छ पानीपुरी, बेच्नेहरु भन्छन् “कागती र चुक हालेर बेच्दा घाटा हुन्छ””
धेरै उपयोगी लेख । धन्यवाद ज्वालाजी । हामी पनि पूजा भाँडा माँझ्न चिनी अमिलो ( तात्री ) प्रयोग गर्छौं । पानी पुरी बेच्नेमाथि निगरानी राख्नु पर्छ । विद्यालयहरू सचेत हुनु पर्छ ।
20 Jul 2017 at 7:43 pm